Prostatitis: Sababaha, Ciladda cudurka, Daaweynta iyo Kahortaga | Ragga Stylish
Qanjirka 'prostate' waa xubin ay ragga kaliya leeyihiin. Waa qanjir jilicsan oo dusha sare ka sameysan oo qeyb ka ah nidaamka taranka ragga. Guud ahaan waa inuu ahaadaa cabirka walnutka, in kasta oo cabirkani uu ku kala duwan yahay waqtiga. Ragga badankood, cabirku wuxuu bilaabmaa inuu kordho markay da'da 40 ilaa 50 jir yihiin. Qanjidhka 'prostate' waxa ku dhici kara xanuunno kala duwan, oo ay ka mid tahay ballaadhin. Taasi waa waxa aan u nimid inaan ka hadalno maanta, oo ku saabsan qanjirka 'prostatitis'
Qormadan waxaan si qoto dheer ugu daaweyn doonaa cudurkan waxaadna awoodi doontaa inaad ogaato sababaha, astaamaha, daaweynta iyo ka hortagga. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato wax kasta oo ku saabsan qanjirka 'prostatitis'? Akhriso oo wax walba ogow.
1 Sababaha iyo astaamaha prostatitis
2 Ka-hortagga iyo noocyada
2.1 Cudurka qanjirka 'prostatitis'
2.2 Qanjirka 'Prostatitis'
3 Ciladda iyo daaweynta
Sababaha iyo astaamaha prostatitis
Qanjirka 'prostate' wuxuu ku yaal meel ka hooseysa kaadi haysta wuxuuna ku wareegsan yahay tuubbada kaadi mareenka. Thanks to hormoonnada, waxay awood u leedahay inay soo saarto dheecaan caano ah oo ku qasma shahwada inta lagu jiro biyo baxa. Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan inay macquul tahaye waa qayb ka mid ah 10% dareeraha shahwada.
Sababta qanjirka 'prostatitis' waa mid noocyo badan leh waxayna kuxirantahay cudurka keena cudurada keena. Waxay noqon kartaa ama aysan noqon karin bakteeriya. Si loo ogaado haddii qanjirka 'prostate' uu bararsan yahay, waxaa jira calaamado dhowr ah oo kugu hagi kara inaad ogaato. Kuwani waa:
Gubasho, xoqid, ama dareen xanuun marka aad kaadineyso (dysuria).
Polyakiuria (Kufsi joogto ah oo kaadi ah).
Dhiig ku jira kaadida.
Waxay kuxirantahay sababta keenta qanjirka 'prostatitis' inuu yahay jeermis asal ah iyo inkale, waxaa jira astaamo kaladuwan. In kastoo ay kala duwanaan karaan, haddana waxay wadaagaan dabeecado sida kuwa kor ku xusan.
Markaad qabtid qanjirka 'prostatitis' waxaad yeelan kartaa qandho iyo qarqaryo waqti kasta oo sanadka ah. Haddii uu keeno jeermis, astaamo kale ayaa la yeelan karaa sida:
Raaxo la'aan xiniinyaha.
Biyo-baxa xanuunka leh
Dareemida cadaadis iyo / ama xanuun ku dhaca kiliyaha iyo caloosha hoose.
Jiidida iyo xanuunka gumaarka.
Cillada Dhabta ah
Sidaa darteed, haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamahan, waxaa fiican inaad sida ugu dhaqsaha badan u aragto dhakhtarkaaga.
Ka-hortagga iyo noocyada
Dhammaan noocyada qanjirka 'prostatitis' looma hortagi karo. Sida caadiga, nadaafad wanaagsan iyo daaweynta caafimaad ee hore ayaa kahortagi kara bakteeriyada si ay ugu faafto qanjirka 'prostate' una keento caabuq.
Si aan wax badan uga baranno kuwa aan ka hortagi karno iyo kuwa aan ka hortagi karin, waxaan falanqeyn doonnaa dhammaan noocyada qanjirka 'prostatitis'. Waxaa loo qaybin karaa laba kooxood oo waaweyn iyadoo kuxiran sababta keentay caabuqa. Sidaan horey u sheegnay, waxaan u kala qaybin karnaa bakteeriyada iyo non-bacterial prostatitis.
Cudurka qanjirka 'prostatitis'
Midka koowaad waxaa sababa jeermiska jeermiska. Cudurkani wuxuu noqon karaa mid ba'an iyo mid daba-dheer. Labada xaaladoodba, bakteeriya gaar ah ayaa gasho qanjirka 'prostate' waxayna keentaa infekshan. Iyada oo laga jawaabayo tan, qanjirka 'prostate' ayaa barara oo calaamadaha aan soo sheegnay waxay bilaabaan inay xanuunsadaan. Xaaladda degdega ah si dhakhso leh ayey u bilaabataa, laakiin cudurka dabadheeraadku wuxuu socon doonaa saddex bilood ama ka badan.
Baadhitaanka cudurka 'prostatitis' ee ba'an ayaa ka fudud in la aqoonsado marka loo eego qanjirka 'prostatitis' ee joogtada ah, maadaama calaamadaha lagu arko si dhakhso leh. Daaweynta laguu fidiyo waa, guud ahaan, qaadashada antibiyootiko si loo dilo bakteeriyada keenta cudurka.
Bakteeriyada kasta waxay sababi kartaa infekshinka kaadi-mareenka oo soo saara bakteeriyada ba'an ee prostatitis. In kasta oo aan si fiican loo aqoon, qaar ka mid ah cudurrada galmada lagu kala qaado sida chlamydia iyo jabtada waxay sababi karaan qanjirka 'prostatitis'.
Ragga ka weyn 35 sano bakteeriyada coli Escherichia Waxay sababi karaan noocyada cudurada sida bakteeriyada kale. Cudurkani wuxuu u horseedi karaa:
Cudurka epididymis: tuubo isku xidha xiniinyaha iyo xididdada dheecaanka ee shahwada iyo shahwaddu ku dhex wareegaan.
Kaadi mareenka: tuubo keenta kaadi ka bixida jidhka iyada oo loo maro guska.
Prostatitis-ka daran waxaa sidoo kale sababi kara dhibaatooyin sida:
Xannibaadda oo yareyneysa ama ka hortageysa qulqulka kaadida ee kaadiheysta.
Dhaawaca aagga u dhexeeya xuubka iyo dabada (perineum).
Isticmaalka daawooyinka, badanaa way baaba'aan waqti ka dib. Haddii aan si wanaagsan loola dhaqmin oo tallaabooyin taxaddar leh la qaado, waxay ku soo noqon kartaa mid daba dheeraada.
Ta labaad ma aha infekshan ay keento wax bakteeriyo ah. Sifudud waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay khalkhalka faaruqinta kaadiheysta ama qanjirka 'prostatic reflux'. Waxaa jira sababaha keena qaarkood waxayna kala yihiin:
Reflux joogto ah oo ka yimaada kaadida una soo qulqulaya qanjirka 'prostate' Tani waxay keentaa cuncun.
Kiimikooyinka qaarkood oo keena cuncun.
Dhibaatooyinka muruqyada sagxada miskaha
Waxyaabaha shucuurta kiciya culeyska fekerka.
Si loo daaweeyo nooca 'prostatitis', waxaa ugu fiican in la xakameeyo astaamaha. Daaweyntu aad ayey u adag tahay. Haddii aan lagu daaweyn waqtiga, waxay kicin kartaa dhibaatooyin kale oo saameeya qaab nololeedka sida kaadida ama galmada.
Xitaa haddii aad hesho baaritaan caafimaad, wax aan caadi ahayn lama soo bandhigo. Si kastaba ha noqotee, qanjirka 'prostate' ayaa laga yaabaa inuu bararo. Si loo ogaado haddii ay bararsan tahay iyo in kale, waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato falanqaynta kaadida. Si aad u ogaatid isku-darka unugyada dhiigga cad iyo casaanka waad garan kartaa xaaladda qanjirka 'prostate'. Waa muhiim in la ogaado in dhaqammada dhaqameed ama qanjirka 'prostate' jiritaanka bakteeriyada aan la muujin.
Ciladda iyo daaweynta
Khaladaad badan ayaa lagu sameeyaa baaritaanka cudurka. Mararka qaarkood cudurada galmada lagu kala qaado ayaa la ogaadaa marka aad qabtid prostatitis.
Daaweynta, khubaradu waxay kugula talinayaan koorso antibiyootiko afka ah oo labada noocba ah qiyaastii 4-6 toddobaad. Haddii loo baahdo, waxay dheereyn lahayd waqtiga qaadashada. Haddii bukaan-socodka loo baahan yahay in isbitaal la dhigo, way ka waxtar badan tahay in antibiyootiko lagu qaato iyadoo la isticmaalayo serum.
Si loola dagaallamo xanuunka, anti-inflammatory sida ibuprofen ama naproxen ayaa loo qori karaa. Waxaa muhiim ah in aan la iloobin in infekshanku uusan ku dhammaan karin isticmaalka antibiyootikada. Sidaa darteed, waxaa fiican in laga hortago.
Si wanaagsan loola dhaqmo Waxaa lagu taliyay:
Kaadi marrar badan iyo gebi ahaanba.
Qaado qubaysyo diiran si aad xanuunka u yareyso.
Ka fogow cuntooyinka basbaaska leh, aalkolada, cuntooyinka kafeega leh iyo cabitaannada, ama casiirka liinta.
Cab inta u dhexeysa 2 ilaa 4 litir oo biyo ah qiyaastii.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto cudurkan iyo daaweyntiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Prostatitis: sababaha, ogaanshaha, daaweynta iyo ka hortagga